နံနကျခငျး အိပျယာထပွီးနောကျ မကျြနှာသဈတိုငျး နစေ့ဉျ ရှတျဖတျ ရမညျ့ မကျြနှာသဈရာ ရှတျကွပါ - YATHAZONE
Category : Religious, ဘာသာရေး
ရှကျဆောငျနိုငျပါစေ သတညျး။ ကြှနျုပျအားပညာ သငျကွား ပေးခဲ့ကွဖူးသော ဆရာသမားအပေါငျ တို့သညျ ဘေးရနျခပျ သိမျးကငျးပါစေ။ ဒေါသခပျ သိမျး ကငျးပါစေ၊ဆငျးရဲခပျသိမျး ကငျးပါစေ။ မိ မိကိုယျကို ခမျြးသာစှာ ရှကျဆောငျ နိုငျကွပါစေ သတညျး။
ရွက်ဆောင်နိုင်ပါစေ သတည်း။ ကျွန်ုပ်အားပညာ သင်ကြား ပေးခဲ့ကြဖူးသော ဆရာသမားအပေါင် တို့သည် ဘေးရန်ခပ် သိမ်းကင်းပါစေ။ ဒေါသခပ် သိမ်း ကင်းပါစေ၊ဆင်းရဲခပ်သိမ်း ကင်းပါစေ။ မိ မိကိုယ်ကို ချမ်းသာစွာ ရွက်ဆောင် နိုင်ကြပါစေ သတည်း။
လူတိုင်းမှာ ကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါတယ်။ မိမိကို ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်စောင့်ရှောက်နေသလဲ သိချင်ရင် တွက်ကြည့်ပါ
လူတိုင်းမှာ ကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါတယ်။ မိမိကို ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်စောင့်ရှောက်နေသလဲ သိချင်ရင် တွက်ကြည့်ပါ လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားဆုံးတစ်ခု့ ရှိပါတယ်။ အရေးကြုံရင် အားကိုး ရှာစမြဲပါ။ တခါတရံ အလွန်အမင်း သတ္တိရှိပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေတောင် အခက်အခဲ အကျပ်အတည်း ကြုံတွေ့လာရင် အားငယ်ကြောက်စိတ်တွေ ဝင်လာတက်ပါတယ်။ အဲ့လို အချိန်အခါ မျိူးမှာ အားက်ုးရှာတက်ပါတယ်။ ဘုရား တရား သံဃာ မိဘ ဆရာ အနန္တော အနန္တ ငါးပါးအား တိုင်တည်တက်သိမှတ်သမျှ ဂါထာတွေရွတ်ပေါ့။ ဒါနဲ့ အားမရဘူး ဆိုပါတော့၊ မိမိအားစောင့်ရှောက် နေသော ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာပဲ၊ ဘာအရေးလဲ၊ ဘာ ကြောက်ရမလဲ။ မိမိအစောင့်က ဖယ်ရှားပစ်လိမ့်မယ်။ ဒီအချက်ကို ကြိုတင်သိပြီး ကိုးကွယ်ချင်မှာပဲ။ မိမိအားစောင့်သော ပုဂ္ဂိုလ် …
အိမ်မှာအထိအခိုက်တခုခု မရှိရအောင် ပဋ္ဌာန်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်နည်း .
အိမ်မှာအထိအခိုက်တခုခု မရှိရအောင် ပဋ္ဌာန်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်နည်း . ပဋ္ဌာန်းရွတ်ရင် မိသားစုမှာ စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေ ဖြစ်တယ်၊ ဘာလုပ်လုပ် အဆင်မပြေဘူး၊ စီးပွားရေးကျတယ်၊ လင်မယား ရန်ဖြစ်တယ်၊ သားသမီးတွေ ဆုံးမရတာ မလွယ်ဘူး၊ အိမ်မှာ ရွတ်လို့မရဘူး အိမ်စောင့်နတ် မခံနိုင်ဘူး၊ ဘုရားမှာရွတ်တယ်၊ အသံတွေကြားရတယ်၊ အရိပ်တွေမြင်ရတယ်၊ ပြီးအောင်ရွတ်လို့မရဘူး အနှောက်အယှက်တွေများတယ်၊ စသည်ဖြင့် ပဋ္ဌာန်းရွတ်ရင် အဆင်မပြေသူများအတွက် ဒီနည်းလေး မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ပထမဆုံး နတ်ပင့်ရပါမယ်။ သမန္တာ စက္ကဝါဠေသု၊ အတြာဂစ္ဆန္တု ဒေဝတာ။ သဒ္ဓမ္မံ မုနိရာဇဿ၊ သုဏန္တု သဂ္ဂမောက္ခဒံ။(ဓမ္မဿဝနကာလော အယံ ဘဒန္တာ။) ၃ခေါက် ဒုတိယက မေတ္တာသုတ် ရွတ်ရပါမယ်။ တတိယက ခွင့်တောင်းရပါမယ်။ ဘုန်းတော်အနန္တ၊ ဂုဏ်တော်အနန္တ၊ …
Total Users : 262403
Total views : 715557